यसरी भयो डा. पुन प्रकरणको ‘सेफल्यान्डिङ’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ७ गते २१:००
सरकारले मिडियामा बोलेको आराेपमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा उपस्थित पत्र काटेपछि सिर्जित आलोचनाको लहरमा नयाँ ‘टुइस्ट’ आएको छ। आइतबार मध्यान्हदेखि मन्त्रालयमा विभिन्न भेटघाटमा व्यस्त राखिएका डा. पुन अपरान्ह मन्त्रालय परिसरबाटै एउटा विज्ञप्ति जारी गरी बाहिरिए।
मन्त्रालयको ढोकाबाट निस्कने क्रममा उनले सबैभन्दा पहिले विज्ञप्तिको औपचारिक भाषा वाचन गरे। त्यसपछि उनी अन्य विषयमा ‘पछि निर्णय लिने’ भन्दै ‘मलिन अनुहार’मा त्यहाँबाट बिदा भए। लगत्तै उनको फोन अफ भयो।
डा. पुनबाटै बाचन भएकाे विज्ञप्ति चाहिँ टेकु अस्पतालका प्रवक्ता रुपनारायण खतिवडाले वितरण गरे। विज्ञप्तिमा ‘मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयसँग जोडी अनर्गल प्रचार नगरिदिनुहुन’ मिडियासँग आग्रहसमेत गरिएको छ।
पुनको विज्ञप्तिको याचना शनिबार दर्जनौँ सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त प्रतिक्रियातर्फ लक्षित छ। उनले मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनि आइतबार नै अस्पतालका तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
‘अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड १९ नियन्त्रणनिम्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन’ भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकाले सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्कसमेत गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
चौविस घण्टामा डा. पुनको अभिव्यक्तिमा अन्तर आयो, सँगै समग्र घटनाको स्वरुप बदलियो। आफूलाई अप्रिय लाग्ने अभिव्यक्ति वा आशय कुनै व्यवसायिक व्यक्तिबाट उठेमा त्यसलाई नसहने भन्ने प्रष्ट सन्देश सरकारले यस प्रकरणबाट दिन खोजेकै हो।
चौबिस घण्टामा डा. पुनको अभिव्यक्तिमा अन्तर आयो, सँगै समग्र घटनाको स्वरुप बदलियो। आफूलाई अप्रिय लाग्ने अभिव्यक्ति वा आशय कुनै व्यवसायिक व्यक्तिबाट उठेमा त्यसलाई नसहने भन्ने प्रष्ट सन्देश सरकारले यस प्रकरणबाट दिन खोजेकै हो।
तर, यो प्रकरण सरकारका लागि पनि भारी पर्ने भएपछि नयाँ सेफल्यान्ड खोजिएको हो। घटना पछिल्लोपटक सतहमा आएपनि यो अवस्थामा आइपुग्न विभिन्न उपघटना विकास भएका थिए।
संक्रमणको सघनतासँगै डा. पुनका आलेख, अन्तर्वार्ताहरु सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुन थाले। त्यसपछि मन्त्रालयले एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सार्वजनिक गर्ने भनेर अस्पतालका र कोरोना भाइरसको बारेमा अस्पतालका प्रवक्तामात्रै बोल्ने भनेर निर्देशन जारी गर्‍यो।
अस्पतालका प्रवक्ता रुपनारायण खतिवडा र क्लिनिकल विषयमा डा. अनुप बास्तोला हुन्। त्यसपछि पनि डा. पुन चुप लागेनन्। ‘मिडियामैत्री’ स्वभावका कारण अस्पतालका प्रवक्ता अनि मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वयम् मन्त्रीभन्दा पनि सञ्चारमाध्यमहरुले डा. पुनलाई पछ्याउन थाले।
अन्ततः बिहीबार मन्त्रालयले उनलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय उपस्थित गराइदिन अस्पताल प्रशासनलाई पत्र काटेको थियो। ‘शुक्रबार काम नभ्याएको’ र, शनिबार ‘बिदा’ भएका कारण डा. पुनले मन्त्रालयको पत्रको कारवाही स्वरुप उपस्थित हुनका लागि अस्पताल प्रशासनले लेखेको प्रतिपत्र आइतबार मात्रै बुझे।
डा. पुनका तर्फबाट जारी र टेकु अस्पतालका प्रवक्ता रुपनारायण खतिवडाले वितरण गरेको विज्ञप्तिमा ‘मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयसँग जोडेर अनर्गल प्रचारहरु नगरिदिन’ भन्दै सञ्चारमाध्यमहरुसँग आग्रह गरिएको छ।
यसले घटनाप्रति भन्दा मन्त्री जोडिएको प्रति मन्त्रालयको बढी चासो रहेको देखाएको छ। यतिसम्म कि पुनको विज्ञप्तिमा मिति गल्ति भएको पछि खतिवडाले नै सच्याइएको जानकारी गराए।
‘विज्ञप्तिमा २०७६ भएछ है, ०७७ हो, तर पनि उहाँकै विज्ञप्ति हो, विचार उहाँ सुत्नु भएको छैन, खानुभएको छैन, बिग्रियो होला,’ रुपनारायण विज्ञप्ति डा. पुनले नै लेखेको भन्ने कुरा पुनर्पुस्ट्याँइ दिन खोजे।
उनले मन्त्रालयको पत्रमा ‘अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी’ कोभिड १९ को मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन भन्ने व्याहोराको पत्र प्राप्त भएकाले सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
यसको अर्थ उनले अस्पतालमा पनि काम गर्ने र मन्त्रालयका काममा पनि सघाउने भन्ने हो। योसँगै डा. पुनको २४ घण्टामा अभिव्यक्ति मात्रै होइन यो घटनाको स्वरुप नै बदलिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
एउटा चिकित्सकलाई काटिएको पत्रसँगै उत्पन्न तरंग मात्रै नभएर मन्त्रालका अधिकारीले कानूनी त्रुटीका कारण डा. पुन प्रकरण मन्त्रालयका लागि महँगो सवित भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
अस्पताल विकास समितिबाट करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई प्रश्न सोध्न वा हटाउन मन्त्रालय नै नचाहिने अवस्थामा मन्त्री पनि मुछिए पनि यो घटनाले अर्कै रुप लिइसकेको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका सो उपस्थित गराइदिन पठाएको पत्रअनुसार काम कारवाही अगाडि नबढ्दै मिडियामा मन्त्रीको नाम मुछिएपछि मन्त्रालयको सिष्टम परिचालन भयो। डा. पुनलाई मन्त्री निकटका व्यक्तिले फोन गरेर समस्यलाई बढी नउछाल्न र निकास खोज्ने भन्दै सचेत गराए। यतिसम्म कि डा. पुन चिकित्सक संघका पदाधिकारीले भेट्न खोज्दा आइतबार बिहानैदेखि उपलब्ध भएनन्।
सचिवस्तरीय निर्णय, सहसचिवको त्यो फोनकल
पुनको मिडिया उपस्थितिलाई लिएर मन्त्रालय मात्रै होइन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वय‌ं अस्पतालकै सहकर्मी पनि सन्तुष्ट थिएनन्।
उनीहरुले विशेषगरी स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र सहसचिव रघुराम विष्टसँग बारबार असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। सो आधार विष्टले पत्र काट्नुअघि पनि डा. पुनलाई पटकपटक फोन गरेर चेतावनीको भाषा बोलेका थिए।
बिहीबार विष्टले डा. पुनलाई ‘किन मन्त्रालयमा बोलाउँदा नआएको, तपाई सरकारी स्थायी डाक्टर पनि होइन किन अटेरी?’ भन्दै झपारेका थिए। सहसचिवले झपार्दा पनि नआएपछि उनलाई पत्र काटिएको थियो।
उनलाई मन्त्रालयले बोलाएर मन्त्रालयको नीति प्रवक्ताले बोल्ने र अस्पतालबारे डा. अनुप बास्तोलाले बोल्ने भन्दै थप नबोल्न चेतावनी दिने योजना बनेअनुसार नै पत्र काटिएको थियो। अहिले विज्ञ भएकोले परामर्शका लागि बोलाइएको भनेर ट्वीस्ट गरिए पनि उनलाई चेतावनीकै लागि बोलाइएको थियो। र स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी थियो।
विष्टले नै अस्पताल विकास समिति ऐनअनुसार करारमा कार्यरत डा. पुनलाई मन्त्रालयमा उपस्थिति हुन पत्राचार गरेका थिए। जब कि करारमा मात्रै भएकाले डा. पुनलाई अस्पताल विकास समितिले करार भंग गर्न सक्थ्यो। वा कारवाही गर्दा पनि विकास समितिकै बाटो लिनसक्थ्यो। त्यसमा पनि एक जना ९औं तहका कर्मचारीलाई उपस्थित गराउन पनि पत्र काट्नु पर्दैर्थ्याे।
आइतबार जे भयो
मन्त्रालय स्रोतका सो उपस्थित गराइदिन पठाएको पत्रअनुसार काम कारवाही अगाडि नबढ्दै मिडियामा मन्त्रीको नाम मुछिएपछि मन्त्रालयको सिष्टम परिचालन भयो।
डा. पुनलाई मन्त्री निकटका व्यक्तिले फोन गरेर समस्यलाई बढी नउछाल्न र निकास खोज्ने भन्दै सचेत गराए। यतिसम्म कि डा. पुन चिकित्सक संघका पदाधिकारीले भेट्न खोज्दासमेत आइतबार बिहानैदेखि उपलब्ध भएनन्।
पुनको हातमा पत्र नपर्दै वैकल्पिक योजना बनाएर समस्या सल्टाउन र वीनवीनको अवस्था ल्याउन मन्त्रीका तर्फबाट चिकित्सक सक्रिय भइसकेका थिए।
चिकित्सक संघको निर्वाचनमा प्रगतिशीलका तर्फबाट उमेदवार बनेका डा. पुष्पमणि खराल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य मनोनित गरेका डा. प्रेनित पोखरेल यो विषय सल्टाउन दिनभर खटिए।
सोही योजनाअनुसार अस्पतालका निर्देशक, केही चिकित्सक बिहानैदेखि मन्त्रालयमा उपस्थित थिए। डा. खराल र डा. पोखरेल डा. पुनले विज्ञप्ति पढेर फर्किंदासम्मसँगै उपस्थित थिए।
सबै योजनापछि १ बजेतिर डा. पुनलाई मन्त्रालय बोलाइयो। पुनले पनि मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च अधिकारीसँग स्पष्टै रुपमा कुरा राखे। मन्त्रीकै कोठामा एक घण्टाभन्दा बढी समय बिताए।
सचिव भेटे, मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्की र नेकपा निकटका चिकित्सकसँग समेत परामर्श गरे। टेकु अस्पतालका चिकित्सक, मन्त्री निकटका चिकित्सकका योजनाअनुसार नै डा. पुन यो विषयलाई थप अगाडि बढाउन सहमत भए।
‘पछिल्ला दिनमा म सँग जोडिएर सार्वजनिक सञ्‍चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरुमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ डा. पुनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मन्त्री ज्यू अनि मन्त्रालयलाई जोडेर अर्नगल प्रचार नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सो सबै प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता र चासो पनि नभएको भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरेका थिए। डा. पुनले पनि चिकित्सकहरुसँग यो घटना मन्त्री वा सचिव तहबाट भएको नभइ अस्पतालकै केही चिकित्सक र सहसचिव विष्टको चाल भएको बुझेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्न राझी भए।
डा. पुनलाई मौखिक चेतावनी र आवश्यक परे स्पष्टीकरणसहित मन्त्रालय तान्ने तयारीमा रहेका सचिव कोइराला, सहसचिव विष्टसमेत पछाडि हटे। यहीबीचमा मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विष्टले सचिवस्तरीय निर्णय मन्त्रालयमा उपस्थित गराइएको बताए।
विष्टले विभिन्न सञ्चारमध्यामसँग मन्त्रालयमा प्रवक्ता रहेको र तोकिएको सिष्टमबाटै बोल्नुपर्ने दावी गर्दै पुनले मिडियामा बोलेको कारण कारवाहीको तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नियमित प्रेस ब्रिफिङमै बिष्टले निकै कडा भाषामा मिडियामा आएका समाचारहरुको खण्डन गरे। लगत्तै डा. पुनको विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक भयो।
‘पछिल्ला दिनमा मसँग जोडिएर सार्वजनिक सञ्‍चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरुमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ डा. पुनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मन्त्री ज्यू अनि मन्त्रालयलाई जोडेर अर्नगल प्रचार नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
र, त्यसमा जोडेर उनले भनेका छन्, ‘आजैको मितिमा म मन्त्रालयमा उपस्थित भएर सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गरिसकेको छु।’
यो प्रकरणमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा अगाडि बढे पनि त्यसको क्षति राजनीतिक रुपमा मन्त्रीले बेहोर्ने अवस्था आएपछि मध्यमार्गी बाटो निकालिएको थियो।
मन्त्रालले कारवाहीकै तयारी स्वारुप काटिएको पत्रलाई पनि डा. पुनलाई मन्त्रालयले विज्ञको रुपमा परामर्शका लागि बोलाए जसरी सफ्ट नियत देखायो। डा. पुनले पनि यो प्रकरणमा मुख बन्द गरेरै बस्ने गरी तत्कालका लागि सेफल्यान्ड खोजे।
शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल